Ikhaya elipholileyo eSpring Hill elinegumbi elinye lokulala. - I-Airbnb
Ikhaya elipholileyo eSpring Hill elinegumbi elinye lokulala.
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRose
Ndihlala apha nam, wamkelekile! Ikhaya lam likwindawo ezolileyo, ndihamba umgama wokuya epakini. Ndinokukhanya okuninzi kwendalo, idesika yangasemva enembono ye-serine yeendawo zasePittsburgh kunye nokuphuma kwelanga. Ikhaya lihonjiswe ngobunono. Igumbi lakho lokulala lihonjiswe ngokuzolileyo ngombono ofanayo nomgangatho kunye nelanga lasekuseni. Ifakwe kwimizuzu ukusuka ePoint, isithili senkcubeko esisembindini wedolophu, iimyuziyam, isithili sestrip kwaye kufutshane namaBala emidlalo (zombini iPNC Park kunye neHeinz Field).
Phakathi kweveranda yangaphambili yekofu yakho yasekuseni okanye idesika yangasemva yeziselo zasebusuku yeyona ndawo ndiyithandayo! Mna Ngaphakathi kwekhaya kukho ingqokelela epholileyo yengubo, imiqamelo, nombala. Wamkelekile ukuba usebenzise ikhitshi, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, indawo yokuhlamba ... nantoni na oyifunayo. Zenzele ikhaya kude nekhaya.
I-TV ene-I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Hulu, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.92 · Izimvo eziyi-115
Ubumelwane buyindawo ezolileyo nethe cwaka yedolophu. Uninzi lwamakhaya kunye neengca zinyanyekelwa kakuhle kwaye nabamelwane banobuhlobo ngokwenene.
Ukuba ungaphezulu kwe-socializer ndikhona kangangexesha elithile lokuxhoma kwakhona kodwa ukunyaniseka ndisebenza kakhulu ngoko ke ngokubanzi ndiza kuba ngaphandle kweenwele zakho. Kutshanje ndifunyenwe yinja. Unemincili kakhulu kwaye uyabathanda abantu kodwa emva kwentlanganiso yakhe yokuqala uyazinza. Unenkqubo eqhelekileyo yendlu kodwa uyabathanda abantu. Kuhlala kukho izinto ezilungiselelwe iindwendwe ukunceda ukwenza abahlobo ukuba unoloyiko oluncinci, okanye ufuna nje ukumosha.
Ukuba ungaphezulu kwe-socializer ndikhona kangangexesha elithile lokuxhoma kwakhona kodwa ukunyaniseka ndisebenza kakhulu ngoko ke ngokubanzi ndiza kuba ngaphandle kweenwele zakho.…
Ixesha lokuphuma lingo:21:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pittsburgh